Ciidanka AMISOM oo toogtay Askar DFS katirsan – Radio Daljir
Ciidanka AMISOM oo toogtay Askar DFS katirsan
Febraayo 24, 2018 10:58 b 0
Iska Hor imaad dhexmaray Ciidamada Dowladda gaar ahaan Nabad sugidda iyo Kuwa AMISOM Ayaa ka dhacay Wadada isku xirta Isgoyska KM4 iyo Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Dhacdadaan ayaa si gaar ah ugu dhacday Goob lagu baaro Gawaarida Gasha garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, Ciidamada Dowladda ayaa xiligaas wadada u xirneed, waxayna Ciidamada AMISOM u sheegeen in wadada ay xiran tahay.
Ciidankii AMISOM ee lagu amreen in ay dib u laabtaan, maadaama wadada ay xiligaasi xirneed ayaa ka dhego fureystay amarkaas, waxaana durba bilawday iska hor imaad Nabad sugidda iyo AMISOM dhexmaray.
Inta la xaqiijiyay 3 Askari oo katirsan ciidamada Dowladda ayaa geeriyootay, Waxaana ku dhaawacmay askar kale, dhanka AMISOM Lama sheegin Khasaara gaaray Ciidamadooda, waxaana mid kamid ah Gawaaridooda waxyeelo gaarsiisay Bam la sheegay in uu ku tuuray Askari katirsan Ciidamada Dowladda, iska hor imaadka kadib.
Wariye ku geeriyooday Magaaladda Muqdisho
Kenya oo beenisay inay xir xirrtay Rag Alshabaab katirsan